Ikhaya / Blog / Oompompi Bendawo Yokugeza BamaNickel Abashaywayo - Inketho Ehle Kuwe
2021 / 09 / 28 UkwahlukanisaBlog 2291 0
Oompompi bezindlu zangasese bafika ngemiklamo eminingi, amafomu nemibala. Eqinisweni, ungathola umkhiqizo ofanele wonke umuntu osemakethe. Kunamathuba amaningi wohlobo lwompompi ofuna ukuwusebenzisa endlini yangasese, njengensimbi engagqwali, ithusi, i-nickel ebhulashiwe, kanye nokuqedwa kwe-chrome. Uma ufuna ukuthola ompompi ohamba phambili wekhaya lakho, udinga ukuhlola izinzuzo ozithola emaphepheni ahlukahlukene, njenge ompompi bendawo yokugezela ye-nickel.
Ukuthola isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu se-nickel esifanelekile sekhaya lakho esitolo esiseduze sokuthuthukisa ikhaya kungahle kumoshe isikhathi sakho. Imvamisa kuphela izinhlobo ezilula kakhulu zesitoko. Uma ufuna ukubuka izinhlobonhlobo zompompi nezinto zangasese, udinga ukungena kwi-Intanethi ngokuphelele. Amawebhusayithi ahlukahlukene azonikela ngemikhiqizo eminingi ngentengo ephansi!
Linganisa izinketho zethenisi lokugezela
Mhlawumbe ompompi ojwayelekile futhi othandwayo yipayipi lensimbi engagqwali. Le ompompi iyinhlanganisela yengxubevange yensimbi ne-chromium. Ngalezi zinhlobo zezinto zokwakha, akungabazeki ukuthi insimbi engagqwali yinto ehlala isikhathi eside. Lolu hlobo lwompompi lunezinzuzo eziningana. Zingaba ompompi bezindleko eziphansi kakhulu, futhi kungathengwa izitayela nemiklamo eminingi ehlukene. Uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo, ukuzisebenzisa empeleni kunezinzuzo ezi-3 ezithile. Isizathu sokuqala ukuthi zingasetshenziswa isikhathi eside ngoba ngeke zigqwale. Lezi zinhlobo zompompi kulula ukuzihlanza futhi zingaqondaniswa nanoma yikuphi ukuhlobisa endlini yokugezela.
Enye inketho kungaba ipayipi elifakwe i-chrome. Uzothola ompompi abashibhile be-chrome-plated. Kodwa-ke, abanye ompompi abafakwe i-chrome bayabiza, futhi bangabiza. Lezi zinketho zokufaka i-chrome ngokuvamile azonakalisi noma ziguge. Ziqinile futhi azikhiqizi izimpawu eziningi ezisobala zokuguga. Kodwa-ke, noma nini lapho kuhlanzwa lezi zinhlobo kompompi, indawo efakwe i-chrome iba buthuntu.
Umpompi wethusi uyingqayizivele. Kodwa-ke, bangaba sohlangothini olubizayo uma kuqhathaniswa nezinye izinketho ezitholakalayo ngoba kunezinketho ezimbalwa futhi kunesidingo esincane kakhulu samakhasimende sompompi abanjalo. Uma zivaliwe ngokungafanele, le mipompi ivame ukubola. Lezi zinketho zingangcolisa futhi zingadinga izindlela ezikhethekile zokuhlanza.
Uma kukhulunywa ngompompi bendawo yokugezela, ompompi bokugezela be-nickel bathathwa njengokhetho lokuqala. Eqinisweni, isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu sokugezela iyona ompompi entsha sha emakethe namuhla. Njengoba lezi zinhlobo zompompi zithandwa kakhulu, uzothola izinketho eziningi maqondana nokwakheka nesitayela. Ezinye izitayela zingabiza ngentengo ephansi ngokuya ngohlobo. Imvamisa aziklwebhi noma zibonise izigxivizo zeminwe. Lezi ompompi zivame ukungalahli inkazimulo yazo ngokuhamba kwesikhathi.
Khetha ompompi bendawo yokugezela ye-nickel esikhundleni sezinye izindlela ezahlukahlukene zompompi
Manje njengoba usuqonda ompompi ongakhetha kuwo, uzokwazi ukukhetha ompompi ofanele wendlu yakho yokugezela. Kulezi zinsuku, abantu abaningi bakhetha ezinye izindlela zesitampu se-nickel esenziwe ngesitayela ngoba azinamandla kuphela futhi zihlala isikhathi eside, kepha futhi zinikeza nesikhalazo esicocekile endlini yakho yokugezela.
Edlule :: Dala Uhlelo Lokuhlobisa Lokugeza Kwamakamelo Ngamapayipi Okugeza
2021 / 09 / 27 2231
2021 / 09 / 25 2353
2021 / 09 / 24 2429
2021 / 09 / 24 2327
2021 / 09 / 24 1448